Guppy (Eside iDemo) - MT4 Izinkomba
ULwesithathu, May 22, 2019
Ikhaya MT4 Izinkomba Guppy (Eside iDemo)
Guppy (Eside iDemo)
Isikhombisi esekelwe umsebenzi zokuhweba umbhali odumile uDaryl Guppy.
It sakhiwa nge 6 Emas ka 3, 5, 8, 10, 12 futhi 15 nezikhathi okukunika isiqondiso nezikhwepha mkhuba yesikhathi esifushane, lo mkhuba Spy. Isetshenziselwa lihambisana namanye iqembu Emas eziyisithupha elinganisa isiqondiso nezikhwepha mkhuba eside noma ukuthambekela big-zimali. Leli qembu Emas ningabaleli 30, 35, 40, 45, 50, 60 nezikhathi like uDaryl Guppy mawasho wona esibekelwe nsuku zonke. Le nkomba senziwa ukuhlaziya kanye zohwebo nsuku esibekelwe amashadi kodwa ingasetshenziswa kweminye ezibekiwe, efana M15 noma H1, ne nezikhathi efanayo futhi setups.
Ngazenza lezo izinkomba ukuze ukwazi ukushintsha uhlobo Moving esijwayelekile, isikhathi kanye isicelo intengo, i.e: okusezingeni eliphezulu, ongaphakeme, evulekile, vala, Intengo ejwayelekile futhi kwesamba esivumelekile Amabha esetshenziswa ukubala ezomhlaba ezihambayo. Ungayishintsha uwedwa ukudayisa kwamanye esibekiwe ukuthi bazizwa bekhululeke kakhudlwana noma ukwenza inkomba bazwelane kakhudlwana izinguquko kancane lo mkhuba wamanje.
Bobabili iqembu Emas ingasetshenziswa ukukala isivumelwano noma ukungavumelani lezi izinhlobo ezimbili abahwebi: zimali kanye Spy. Lokhu kukunikeza ukuqonda kangcono le mpi phakathi kwawo kanye nokwenzeka okufakiwe kangcono esivuna esikhona manje noma izinguquko okuseduze kuso.
Ukuze uthole incazelo yokuthi indlela yokuyisebenzisa ungavakashela:
Mangisho ukuthi uma la maqembu amabili Emas kukhona kuqondane and zasondelana, kokubili bodwa futhi phakathi kwamaqembu, zimali bamazwe abangazazi e sivumelwano futhi isinyathelo esikhulu liseduze kakhulu. Njengoba Ngifunde e “Market Wizards”, kunjani uma esikhathini esidlule endaweni liyaphithizela Wall Street egumbini ibibanjwe ngokungenzi lutho nge kungahambi amanani, futhi isikhathi esincane ngemva, Ukuthutha zasendle kubo wenza abantu ujike sengeneme.
Mangisho ukuthi angisona Unicode nami kuphela wenze lesi inkomba ngokwami, futhi manje ngifuna ukwabelana ngayo.
Kule-version yesibili, Ngiye wanezela ukuthi kungenzeka ukuguquguquka ezomhlaba ezihambayo like file45 Kunconywa kimi.
Guppy (Eside iDemo) kuyinto Metatrader 4 (MT4) Inkomba futhi ngokuyisisekelo inkomba forex iwukuba uguqule umlando idatha zanqwabelana.
Guppy (Eside iDemo) inikeza ithuba lokuthi bazokwazi ukuhlonza izici ezihlukahlukene futhi amaphethini amanani dynamics okuyizinto ezingabonakali ngeso lenyama.
Indlela ukufaka Guppy (Eside iDemo).mq4?
Download Guppy (Eside iDemo).mq4
Kopisha Guppy (Eside iDemo).mq4 ukuze Metatrader yakho Directory / ochwepheshe / Izinkomba /
Right uchofoze Guppy (Eside iDemo).mq4
inkomba Guppy (Eside iDemo).mq4 itholakala ku Ishadi yakho
Indlela ukususa Guppy (Eside iDemo).mq4 kusukela Metatrader yakho 4 Ishadi?
esihlokweni esanduleleRoyse RSI
esihlokweni esilandelayoRogue umkhaza umtshina